व्यापारीबाट राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पको ४ वर्षमै घट्यो रु. १४०३२ करोडले सम्पत्ति Bizshala -
व्यापारीबाट राष्ट्रपति बनेका ट्रम्पको ४ वर्षमै घट्यो रु. १४०३२ करोडले सम्पत्ति
काठमाण्डौ । व्यापारीबाट अमेरिकाको राष्ट्रपतिसम्म बनेका डोनाल्ड ट्रम्पको सम्पत्ति ४ वर्षमा १.२ बिलियन डलर अर्थात १४०३२ करोड रुपैयाँले घटेको छ।
अमेरिका ४५ औँ राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल हिजोबाट सकिएको छ। जो बाइडन ४६ औँ राष्ट्रपतिका रुपमा पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्।
फोब्र्सका अनुसार चार वर्षअघि ट्रम्पको कुल सम्पत्ति ३.७ बिलियन डलर (४३२०० करोड रुपैयाँ) थियो। राष्ट्रपति बनेपछिको चार वर्षपछि उनको सम्पत्ति घटेर कुल २.५ बिलियन डलर (२९२८० करोड रुपैयाँ) मा सीमित बनेको छ। अर्थात यो अवधिमा उनको कुल सम्पत्ति १.२ बिलियन डलर (१४०३२ करोड) ले घटेको छ।
ट्रम्पको ट्रम्प अर्गनाइजेसन रहेको छ। यो कम्पनीले विशेषगरी रियल स्टेटमा लगानी गर्छ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार पिता फ्रेड ट्रम्पबाट ट्रम्पले ४१३ मिलियन डलर अर्थात ४८०० करोड रुपैयाँ सम्पत्ति पाएका थिए। फ्रेडले नै ट्रम्प अर्गनाइजेसन सुरु गरेका थिए। यो कम्पनीले रियल स्टेटका साथ होटेल, गल्फ र लाइफस्टाइलजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्छ।
लकडाउनका कारण ट्रम्पको रियल स्टेट व्यापारमा ठूलो नोक्सानी भएको थियो। – एजेन्सी
काठमाण्डौ । विश्व महाशक्ति भन्ने क्रममा युद्धपोत निर्माणमा चीनले...
साउदी अरबमा हमलापछि कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो, भाउ २
काठमाण्डौ । साउदी अरबको तेल कम्पनीहरुमा कथित हमलाहरुको खबरले...
विश्व बजारमा बिटक्वाइनतर्फ आकर्षित हुँदै सुन तथा सेयरका
काठमाण्डौ । विश्व बजारमा सेयर तथा सुनका लगानीकर्ताहरु यतिबेला...
वारेन बफेटबाट पनि भएका छन् ठूलठूला गल्ती, एउटै डिलमा २२.३ अर्ब
काठमाण्डौ । विश्व सेयर बजारमा धेरैका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेका...